ऐश्वर्या उड्छिन आफ्नै प्राइभेट प्लेनमा, अरु को को छन् त आफ्नै प्लेन भएका बलिउड कलाकारहरु ? – Khabar Silo
ट्राफिक जाममा घण्टौं बिताउन जो कसैलाई पनि मन पर्ने कुरा होइन । तर, यदि तपाईं सेलिब्रेटी वा सुपरस्टार हो भने तपाईं अत्यन्तै बिलासी गाडी किन्न सक्नुका साथै आफ्नै जेट वा हेलिकोप्टर पनि किन्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ।
नेपालमा भने सानो बजार र थोरै जनसंख्या भएका कारण सेलिब्रटिहरु अझै पनि बिलासी गाडी वा आफ्नै जेट किन्ने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । यद्यपि सामान्य खाले गाडी भने नेपाली सेलिब्रेटिहरुको पनि पहुँचमा हुन थालेको छ, पछिल्लो समयमा ।
सेलिब्रेटिका अलावा अर्बपतिहरु र ठूला ब्यवसायीक घरानाका मालिकहरु, जो आर्थिक रुपमा निजी बिमान वा हेलिकोप्टर किन्ने क्षमता राख्छन्, ले पनि निजी बिमान वा हेलिकोप्टर किनेको सुनिएको छैन ।यहाँ भने त्यस्ता १० सेलिब्रेटि र अर्बपतिहरु प्रस्तुत गरिएको छ जो आफ्नै प्लेनमा आकाशमा उड्छन् र, तल सडकमा हुने ट्राफिक जाम छल्छन् ।
ओपेरा विन्फ्रि विश्व बिख्यात मिडिया सेलिबे्रटि हुन् । सेलिबे्रटि हुनुका साथै उनी फोब्र्समा सुचीकृत अर्बपति पनि हुन् । उनीसँग झण्डै ३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति छ । उनीसँग ‘बोम्बारडियर ग्लोबल एक्सप्रेस जेट’ छ । उनी सँधैं सो जेटलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति बताउने गर्छिन् ।
टम क्रुजले ‘टप गन’ भन्ने फिल्मबाट सन् १९९४ मा खुबै ख्याती कमाए । त्यसै बर्ष उनले पाइलटको लाइसेन्स पनि लिए । र, त्यसपछि उनले धेरै प्लेनहरु किनिसकेका छन् । उनको सबैभन्दा चर्चित जेट P–51 मुस्ताङ हो ।
शाहरुखलाई फसाउन यति सम्म गरिएको रहेछ तर…..
Posted on November 20, 2021 Author khabar silo
शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान सं’ल’ग्न क्रु’ज ड्र’ग्स मामिलामा बम्बे हाईकोर्टले शनिबार बिस्तृत फैसलाको कपी जारी गरेको छ । ‘प्रथम दृष्टया आरोपीहरुविरुद्ध त्यस्तो कुनै प्रमाण मिलेन, जसले यो विषय साबित गरोस् कि उनीहरुले ड्र’ग्ससँग सम्बन्धि कुनै अपराध गर्ने ष’ड्य’न्त्र गरेका थिए,’ फैसलामा उल्लेख छ । यसअघि आर्यन र उनका दुई साथीहरु जमानतमा रिहा भएका थिए […]
काबुल । अफगानिस्तानमा सैन्य हवाई कारबाहीमा दुई सय भन्दा धेरै तालिबान विद्रोहीहरु मारिएका छन् । अफगानिस्तानको शेबर्गन क्षेत्रमा तालिबान विद्रोही लडाकुहरुमाथि भएको हवाई कारबाहीमा दुई सय भन्दा धेरै लडाकुहरु मारिएका हुन् । शेबर्गन क्षेत्रमा लुकेर बसेका साथै लडाकुहरुको भेलालाई लक्षित बी फिफ्टी टु बमवर्षक विमानद्धारा सैन्य हवाई कारबाही गरिएको अफगानी रक्षा मन्त्रालयले बताएको हो । […]
चुनाव हारेका ट्रम्पले पद हस्तान्तरण नगरे के होला ? यस्तो छ विगत
एजेन्सी- अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव हारेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अझै पनि पराजय स्वीकारेका छैनन् । बरू, चुनावमा धाँधली भएको भन्दै उनले अदालती प्रकिया सुरू गरेर कानुनी चुनौती दिएका छन् । ४६औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेन आफ्नो कार्यकालको कार्ययोजना बनाउन लागि परेका छन् । अब सबै प्रकिया पूरा गरेर सहजरूपमा सत्ता हस्तान्तरण भए बाइडेनले कम्तीमा अढाई महिनाभित्र […]